Famakafakana momba ny fananganana mekanika ny tsy fahampian'ny fametahana vy amin'ny epc | Yingyi
Famakafakana momba ny fananganana mekanika amin'ny tsikombakomba fampidirana slag amin'ny fanariana vy amin'ny epc
1 Ny fiparitahan'ny lesoka fampidirana slag amin'ny fanariana vy miaraka amin'ny epc
Tena sarotra ny mamokatra casting vy miaraka amin'ny bobongolo very. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'izy ireo dia fanariana mahatohitra, fanoherana ny hafanana ary ny harafesina tsy misy fanodinana na fanodinana kely, na fanariana rindrina manify hafa. Ny antony lehibe mahatonga ny lesoka amin'ny fanariana vy ambany karbaona dia ny tsy fitoviana amin'ny carburization sy ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny ampahany matevina sy lehibe. Fa ny vy fanariana amin'ny sasany hateviny sy ny ankamaroan'ny ambany karbaona vy castings, ny ampahany amin'ny carburization, slag fampidirana na porosity kilema dia mihoatra ny 60%, izay mahatonga ny ambany karbaona vy sy matevina matevina fanariana vy lasa olana sarotra ny very bobongolo fanariana dingana, ary na dia heverina fa ny very bobongolo fanariana dingana dia tsy mety amin'ny vy castings.
1.1 Ny endrika kilema amin'ny fanariana vy epc
Ny lesoka amin'ny fanariana vy epc dia ny fampidirana slag, porosity ary carburization. Ny endriky ny kilema dia tsy ara-dalàna, ny sisiny tsy ara-dalàna, ary ny hakitroky ny kilema dia miparitaka be, izay miseho amin'ny loko samihafa amin'ny diagrama metallografika. Ny endrika fanangonan'ny lesoka dia endrika cluster miaraka amin'ny sisintany manjavozavo sy loko miparitaka, izay sarotra esorina amin'ny alàlan'ny fanodinana.
1.2 Ny ampahan'ny lesoka amin'ny ampahany vy fanariana bobongolo very
Ny ampahany amin'ny lesoka amin'ny fanariana vy epc dia avo be. Anisan'izany ny fanariana -, ny hafanana - ary ny fanariana vy mahatohitra harafesina, na ny fanariana vy manify sy matevina, tsy misy na tsy misy machining. Ho an'ny fametahana vy amin'ny rindrina manify, ny lesoka dia ny ankamaroan'ny pores sy ny lavaka misy lavaka eo amin'ny fototry ny vavahady na ny riser. Ho an'ny fanariana vy amin'ny rindrina matevina, ny lesoka dia ny tsy fahampian-tsakafo subcutaneous. Ho an'ny fanariana vy ambany karbaona, ny lesoka dia ny tsy fahampian'ny carburization amin'ny ankapobeny.
1.3 Ny ampahany mora amin'ny kilema amin'ny epc fanariana vy
Ny hatevin'ny rindrina sy ny votoatin'ny karbaona amin'ny fanariana vy epc dia samy hafa amin'ny faritra izay mora misy ny lesoka. Fa manify rindrina telo mahatohitra castings, indrindra hita ao amin`ny fanariana sy ny vavahady na riser mifandray ampahany. Ny ampahany izay mifandray amin'ny dingan'ny famenoana fanariana, ny fikorianan'ny fotoana maharitra, mba hitazonana ny fotoana mafana kokoa, ny vy miendrika dia manafana ny fitaovana bobongolo, ny akora bobongolo, ny fandoroana ampahany dia mandray entona bebe kokoa amin'ny vy sy ny fanangonam-bolo amin'ny fanakanana. , vy miendrika hihena sy solidification shrinkage, mora ny mahatonga ireo faritra ireo rehefa avy hihena solidification endrika lavaka, shrinkage porosity, slag mifangaro kilema.
2. Ny famenoana lasitra amin'ny vy vita amin'ny epc
Ny kilema fanariana dia miforona amin'ny fotoana fanariana famenoana dingana fanamafisana, Amin'ny ankapobeny dia fohy dia fohy ny fotoana famenoana ny fanariana kely sy antonony, ary fohy ihany koa ny fotoana famenoana ny fanariana lehibe. Tsy mitovy amin'ny fanariana lavaka mahazatra, ny maha-tokana ny famenoana lasitra amin'ny fanariana epc no tena antony mahatonga ny tsy fahampian'ny fanariana vy epc.
2.1 Famenoana endrika fanariana vy epc
Raha ny fizotran'ny famenoana vy amin'ny epc, ny ankamaroan'ny fikarohana dia mifototra amin'ny dingan'ny famenoana ny epc ho an'ny firaka aluminium, ary ny ankamaroany dia feno tsy misy fanerena ratsy. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny endriky ny famenoana vy amin'ny ranon-javatra dia rehefa avy niditra tao amin'ny "lava" fanariana avy amin'ny vavahady anatiny, ny anoloana metaly ranoka dia mandroso amin'ny endrika miendrika mpankafy. Eo ambanin'ny hetsiky ny sinton'ny tany dia mivadika midina ny famenoana metaly ranon-javatra eo anoloana, fa ny fironana amin'ny ankapobeny dia ny manosika hiala amin'ny vavahady anatiny mandra-pahafeno ny "lavaka". Ny endriky ny sisin-tany amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny metaly sy ny endriny dia mifandraika amin'ny mari-pana amin'ny metaly ranoka, ny toetran'ny fitaovana bika ary ny hafainganam-pandehan'ny famenoana. Raha avo kokoa ny mari-pana amin'ny metaly ranon-javatra, dia kely kokoa ny hakitroky ny endrika ary haingana kokoa ny hafainganam-pandehan'ny famenoana, haingana kokoa ny hafainganam-pandehan'ny metaly ranon-javatra amin'ny ankapobeny. Izy io dia miovaova amin'ny karazana firaka, ny mari-pana nandraraka, ny faritry ny sprue, ny hafainganam-pandehan'ny rano, ny hakitroky ny endriny, ny permeability ny rivotra amin'ny hafanana ary ny tsindry ratsy. Ho an'ny firaka aluminium tsy misy fanerena ratsy, ny fifandraisana misy eo amin'ny metaly sy ny endrika dia azo zaraina ho modely efatra araka ny fepetra samihafa: fomba fifandraisana, fomba fiasa, fomba fianjerana ary fomba fandraisana anjara.
Ao amin'ny lasitra amin'ny famokarana vy vy, Nariana tapa-vy, orinasa Shinoa dia eo amin'ny dingan'ny fanariana hanery ratsy fanerena ny maina fasika fanariana, hanenjanana kokoa ny maina fasika bobongolo, manao ny bobongolo amin'ny hery ampy sy ny henjana, mba hanohitra ny fiantraikan'ny ranon-javatra metaly sy ny buoyancy, miantoka tanteraka fandatsahana. ary fanamafisana amin'ny fomba mahomby, mba hahazoana rafitra feno amin'ny castings. Ny lasitra fasika maina dia manana tanjaka sy stiffness ampy nefa tsy mampitombo ny haavon'ny boaty fasika. Izy io dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny teknolojia fanariana very mode.
3 Famakafakana ny loharano sy ny thermodynamika ary ny kinetika ny fampidirana slag amin'ny vy mitsonika
Misy loharano maro ny slag sy ny entona amin'ny vy voarendrika, ao anatin'izany ny sisa sy ny entona pyrolysis vokatra toy ny gasification, ny sisa sy ny entona novokarina tao amin'ny dingan'ny fandrendrehana ny vy, ary ny oxide sisa niforona tamin'ny oxidation ny vy nitsonika, ary ny fandravana. amin'ny entona sasany amin'ny vy miendrika hafanana. Noho ny hakitroky kely amin'ireo dregs sy entona ireo, dia mitsingevana miadana miakatra izy ireo amin'ny dingan'ny famenoana sy ny fizotry ny fampangatsiahana ranon-javatra alohan'ny hivaingana, ary mitsingevana mankany amin'ny fanerena ambany kokoa noho ny fanerena ratsy.
4 Fomba sy soso-kevitra hampihenana ny fametahana ny tapany vy miaraka amin'ny fanariana bobongolo very
4.1 Ahena mivantana ny fampidirana tany am-boalohany amin'ny vy anidina
Ny fampihenana ny fampidirana ao amin'ny vy miendrika alohan'ny fandrarahana dia iray amin'ireo fomba lehibe hampihenana ny tsy fahampian'ny tavy amin'ny fanariana bobongolo very. Misy fomba maro hanadiovana ny vy miendrika, toy ny fampiasana slagging fitaovana, miantehitra amin'ny adsorption ny fanadiovana mpandraharaha amin'ny fampidirana, adsorbed ny poti kely ny fampidirana amin'ny poti lehibe ny fanampiny fanadiovana mpandraharaha, mamorona ny boky lehibe kokoa ny fampidirana. particles, izay mahasoa mba hanatsarana ny toe-piainana mavitrika ny mitsingevana.
4.2 Mampihena ny fampidirana ao anaty vy miendrika amin'ny alàlan'ny fepetra ara-teknolojia ary manamafy ny famoahana ny fampidirana
(1) Ny famolavolana ara-drariny ny rafitra riser nandraraka. Araka izay azo atao amin'ny latsaky ny iray boaty fanariana, araka izay azo atao mba hampihenana ny fisian'ny vy voarendrika ao amin'ny rafitra fandatsahana fotoana, izany hoe, mampihena na manafoana ny mpihazakazaka; Ny fanariana boaty mihoatra ny iray dia tsy maintsy hahatonga ny rafitra fandatsahana ho lava loatra. Rehefa feno ny rafitra fandatsahana vy vy, dia mora ny mamokatra korontana sy splash ao amin'ny multi-miondrika sy miovaova fizarana fantsona ny rafitra fandatsahana, izay mampihena ny mari-pana amin'ny vy voarendrika, mitarika ho any an-endrika vy oxidation, scours ny lafiny rindrina ny sprue, ary mampitombo ny inclusions tany am-boalohany amin'ny vy anidina.
(2) mampihena ny endriky ny adhesive tonon-taolana. Be loatra ny endrika fatorana hantsana, mora ny mahatonga ny banga amin'ny fiovana be loatra amin'ny lakaoly, ka miteraka adhesive tonon-taolana convex na concave. Noho ny hakitroky avo kokoa ny adhesive convex, ny entona sy ny sisa tavela taorian'ny gasification dia bebe kokoa, niteraka ny fitomboan'ny totalin'ny slag; Ny lakaoly adhesion concave dia mamorona hantsana, rehefa coating coating, ny coating amin'ny permeability mahery vaika dia miditra mora foana ao amin'ny banga concave.
(3) Ny fampihenana sahaza ny fanerena ratsy. Ny fanerena ratsy dia antony lehibe mampitombo ny korontana vokatry ny famenoana vy. Ny fitomboan'ny fikorontanana dia mahatonga ny vy mitsonika hamakivaky ny rafitra fandatsahana sy ny rindrin'ny "lava", ary ny vy voarendrika dia hiparitaka bebe kokoa, mamorona vortex mikoriana, mora tafiditra amin'ny fampidirana sy ny entona. Ny fomba mety dia ny hihaona amin'ny tanjaka mety sy ny hamafin'ny fasika maina fanariana ary miantoka fa ny fanariana dia tsy mirodana eo amin'ny dingan'ny fandatsahana famenoana, ny ambany ny ratsy tsindry, ny tsara kokoa.